အေမာမ် ဇမာန်း (အ. ဂျ) အလျင်အမြန် ဖူးပွင့်ရန်အတွက် ဒိုအာ ပြုခြင်း အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
အေမာမ် ဇမာန်း (အ. ဂျ) အလျင်အမြန် ဖူးပွင့်ရန်အတွက် ဒိုအာ ပြုခြင်း
စကျတငျဘာ ၂၆, ၂၀၁၈ - ၇:၄၉ ညနေ News Code : 910627 Source : ABNA Link:
( ကျွန်ုပ် အလျင်အမြန်ဖူးပွင့်ရန် အတွက် ဒိုအာများများ ပြု လုပ်ပါလေ။ အကြောင်းမှာ ဤကိစ္စတွင် အသင်တို့ကိုယ်တိုင် အ တွက် သက်တောင့် သက်သာ ရှိမှုဖြစ်စေပါသည်။ )
) اٴَكْثِرُوْا الدُّعٰاءَ بِتَعْجیلِ الْفَرَجِ، فإِنَّ ذٰلِكَ فَرَجُكُمْ(
အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ် အဗ်နာ) သတင်းဌာန
ဤ ဟဒီးစ်တော်၏ စာသားသည် အေမာမ်ဇမာန်း(အ.ဂျ)အနေ ဖြင့် အစ်္စဟက် ဗင်ယအ်ကူဗ် ၏ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားမိန့် တော် မူထား သည့် အဖြေ ဖြစ်ပါ သည်။ ဤဟဒီးစ်တော်တွင် အေမာမ် (အ.ဂျ)အနေ ဖြင့် အလျင်အမြန်ဖူးပွင့်ရန်အတွက်ဒိုအာ များများပြုလုပ်ရန် မိန့်ထားပါသည်။ဤအေမာမ် ၏ အမိန့် တော် သည် ဆိုလိုချက် (ဒိုအာများများလုပ်ရန်ကိစ္စ) ၏ အရေးကြီး မှုကို ဖော်ပြနေပါသည်။ အကြောင်းမှာ ရှီအာများ၏ အခက်အခဲများ ၊ ဘေးဒုက္ခများ အဆင်ပြေ ကင်းဝေမှုသည် ဟဇရသ် အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (အ.ဂျ) ၏ဖူးပွင့်မှု အရိပ် အောက်မှာ သာလျှင် ဖြစ်နိုင်သည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အေမာမ် (အ.ဂျ) ဂိုက်ဗသ်တွင် ရှိနေသမျှ ရှီအာလည်းပဲမင်းဆိုးမင်းညစ် ရက်စက် ယုတ်မာ ညှဉ်းပန်းသည့်အာဏာ ရှင်များ၏ ပစ်မှတ် ဖြစ်နေ ပေမည်။
ဤဟဒီးစ်တော်တွင်အချို့ ပွိုင့်များပါရှိပါသည်။ ၎င်းဘက်ကို ညွှန်ပြပါမည်။
၁။ရှီအာများ အတွက် အဆင်ပြေ လွယ်ကူမှုများ ရှိပါသည်။ ရှီအာ များသည် ရက်စက် ညှဉ်းပမ်း နှိပ်စက် မှု အစွဲစွပ်ခံမှု တို့မှ လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မည်။ ထိုနေ့ သည် ရွှေရက် (အဖိုးတန်ရက်) ရောက်လာပါ လ်ိမ့်မည်။ ရှီအာများသည် မိမိတို့၏ မောင်လာ ၊ အာဂါ ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ ၏အရိပ်အောက် တွင် သက် တောင့် သက်သာရှိမှု ၊ လူဖူဖူလုံမှု ဖြင့် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘဝကို တည် ဆောက် ကြပါလိမ့်မည်။
၂။အေမာမ်ဇမာန်း(အ.ဂျ)ဖူးပွင့်မှု နှင့် ပတ်သက်ပြီးဗဒါအ် ( بداء)ဖြစ်ပေါ်ပါမည်။ နောက် တစ်မျိုးပြော ရမည်ဆိုလျှင် ဖူးပွင့်မှု တွင် အလျင်အမြန်နှင့် နှောင့်နှေး မှု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ်တော် (အ.ဂျ)အလျင် အမြန် ဖူးပွင့်ဖို့အတွက် အကြောင်းခံအချက်များ မှ တစ်ခုမှာ ဒိုအာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိ နားလည် ထား သည်မှာ ဒိုအာ သည် နှလုံးသား၏မေတ္တာရပ်ခံချက် နှင့် အခြေ အနေ ဖန်တီးပေးမှု မရှိဘဲ အာနိသင်သက်ရောက်မှု ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ မနုဿာလူသားအနေဖြင့် နှုတ်နှင့်အတူ နှလုံးသား နှင့်ပါ မေတ္တာ ရပ်ခံတောင်းဆိုရမည်။ လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့် သုံး မှု တွင်လည်း မိမိကိုတိုင် (အေမာမ်(အ.ဂျ) အလျင်အမြန် ဖူးပွင့် လာရန်အတွက်) အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီး ပေးရပါမည်။
 کمال الدین، ج2، ص485، ح4، الغیبة،طوسی، ص293، ح247، احتجاج، ج2 ، ص284، اعلام الوری، ج2، ص272، کشف الغمة، ج3، ص340، الخرائج و الجرائح، ج3،ص1115، بحارالانوار، ج53، ص181، ح10